‘वार’को बम्पर ओपनिङ, पहिलो दिन नै यति धेरै कमाई ! - Sawal Nepal
‘वार’को बम्पर ओपनिङ, पहिलो दिन नै यति धेरै कमाई !
एजेन्सी १६ आश्विन २०७६, बिहीबार ११:५९
काठमाडौं / ऋतिक रोशन र टाइगर श्रोफ अभिनित फिल्म ‘वार’ रिलिज हुने बित्तिकै बक्स अफिसमा धमाका मच्चाइ रहेको छ । फिल्म रिलिजको पहिलो दिननै दर्शकको राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ । रिपोर्ट अनुसार पिल्मले पहिलो दिन ३५ देखि ४० करोडको व्यापार गरेको छ ।
फिल्म ‘वार’ हिजो २ अक्टोवरका दिन गान्धी जयन्तीको अवसर पारेर रिलिज भएको हो । ‘वार’ बक्स अफिसमा साउथ फिल्म‘ साय रा नरसिम्हा रेड्डि’ र हलिउड फिल्म ‘जोकर’ संग भिडिरहेको छ । तर पनि फिल्म ‘वार’ लाई खासै असर परेको छैन । यो फिल्मको बजेट १५० देखी २०० करोड रहेको बताइएको छ ।
यस्तो छ फिल्म ‘वार’ को कहानी
भारतीय सेना का स्पेशल मिशन ह्याण्डिल गर्ने मेजर कबीर लुथर (ऋतिक रोशन) लाई यस फिल्ममा बागी देखाइएको छ । कबीर फरार छन् र अब भारतको लागि उनी खतरा भैसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सेना खालिद खान (टाइगर श्रोफ) र कर्नल लूथरा (आशुतोष राणा) लाई कबीरलाई खोज्ने जिम्मा दिएको छ । फिल्म यसैको सेरोफेरोलाइृ लिएर बनाइउको छ ।
लक्ष्मीको सुन्दरता १० तस्बिर